Warkii Hore War Soo Dhaaf - Matthijs De Ligt Oo Ka Faa'idaysanaya Xiisaha Kooxaha Badan Uga Imanaya & SHARDI Uu Ku Xidhay Barcelona Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Da’yarka ahna kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt ayaa lagu soo warramayaa inuu isaga qudhiisu samayn doono caqabad kale oo heshiiskiisa ay Barcelona ku doonayso adkayn doona.
De Ligt ayaa figta ugu sarreysa ka jooga liiska xiddigaha ay Barcelona ka doonayso Camp Nou xilli ciyaareedka dambe balse kooxda ree Spain ayaa la sheegayaa in aysan waxyaabo ka bad-badis ah u samayn doonin saxeexiisa haddii uu dhibaatooyin keeno.
Sida uu haatan sheegay Catalunya Radio daafacan dhexe ayaan isagu ku raacsanayn wakiilkiisa iyo kooxdiisu waxyaabaha ay isla meel dhigeen ee ku saabsan qorshaha lagaga iibinayo Barca.
De Ligt ayaa ah mid samaynaya caqabad kale oo ku adkaan karta Barcelona maadaama oo la sheegay inuu dalbanayo mushahar ka badan midka ay kooxdaasi kula heshiisay De Jong oo ay Ajax kawada tirsan yihiin.
Kooxda ayaa markii hore qabtay aragtida ah in ciyaartoygani uu hoos u dhigi doono rabitaankiisa dhaqaale marba haddii uu doonayo inuu yimaado kooxdooda.
De Ligt ayaa isagu ogsoon inuu dalabaad ka haysto kooxo badan oo qaarada Yurub ah kuwaas oo usoo bandhigay heshiisyo aad uga wanaagsan midka ay Barcelona ku doonayso.
19 jirkan ayaa doonaya inuu maamulka Camp Nou ku cadaadiyo dalabaadka kale ee heerka sarre ah ee uu ka helayo kooxaha ugu tunka weyn qaarada Yurub.
Ugu dambayn, Wargeyska Mundo Deportivo oo kasoo baxa gobolka Catalunya ayaa isaguna sheegaya in Barca ay wakhti u qabatay De Ligt isla markaana ay sugayaan inuu 10 cisho kaga soo jawaabo rabitaankiisa.